Izazi zengqondo zithi akukho lutho olunikezwa ize empilweni. Futhi uma sikhuluma ngobuhlobo bomuntu siqu, zidinga ukulayishwa, futhi ubudlelwane obuhlukile badinga ukwakheka okuhlukile. Kuyaziwa ukuthi enye indlela noma enye, kodwa zonke ubuhlobo ngokushesha noma kamuva zikhuthazelela inkinga, futhi leyo mizamo edinga ukuqondiswa ukunqoba esigabeni esilandelayo nayo ihlukile. Indlela yokugcina ubuhlobo obufudumele nomyeni wakhe, kunezimo lapho ubudlelwane emindenini bubunjwa kahle, ngaphandle kwezinkinga.
Ngokusho kwengqondo, kunezindlela ezithile zomhlaba wonke ezizosiza ukugcina iminyaka eminingana, ubuhlobo besifiso. Abesifazane kulula kakhulu ukugcina ukukhathazeka, ngakho-ke, futhi kungenzeka, lezi zimali zifanele amadoda. Basiza kuzo zonke izimo, futhi akufanele baphathwe kabi, ngoba isigamu sesibili singakusho ukuthi usunamaqiniso. Futhi-ke, uma zisetshenziselwa njalo, ubuningi bokuzwa bungalahleka.
Ubuhlobo obuseduze nobushushu nomyeni wakhe bungagcinwa kuphela uma indoda nowesifazane bevivinya uthando lomunye nomunye. Futhi uma kungenjalo imizwa enjalo, ngakho-ke akukho ngisho neyindlela evamile kakhulu kuyosiza ukuveza ukukhathazeka. Ake sibheke amathiphu.
1. Kudingeka ufunde ukuthi ungakhulumisana kanjani ukuze kungabi nje ukuncoma, lawo mazwi afudumele kufanele asho ngokuphelele ngobuqotho nangenhliziyo ehlanzekile. Emva kwakho konke, mhlawumbe kukhona into engxenyeni yakho, yini oyithandayo? Noma ungathanda yini amehlo akhe, imilenze? Uma unenhliziyo ecindezelayo, lapho intandokazi yakho iphuma ngengubo enhle, emangalisa, ngakho tshela othandekayo wakho ngakho. Indoda ingadumiswa ngaso sonke isikhathi ngenxa yobuningi bayo, ukukhathalela kwakhe, ukubekezela, ukuphumelela emsebenzini wakhe. Mdumise kakhulu othandekayo wakho, ngoba ufanelwe lawa magama, akakho nanoma yiziphi izincomo. Futhi la mazwi amnandi angenza isimangaliso, isigamu sakho siyojabula, uphumule, kodwa awuzange uyifunde?
2. Ngiyajabula kakhulu ukufeza isicelo sabathandekayo babo. Uma ucelwa ukuba unake, ulalele noma ugqoke, ingubo ayifunayo akudingeki inqatshelwe, uphathe othandekayo ngenhlonipho. Futhi uma egcwalise isicelo sakho, njalo umdumise ngakho.
3. Zama ukumangala omunye nomunye. Uke wahlala ndawonye iminyaka eminingi futhi wazi konke ngomunye nomunye? Ingabe kusihlwa kwakho kudlula ngendlela efanayo? Futhi wenzelwa othandekayo wakho isidlo sothando samakhandlela e-romantic. Uma intandokazi yakho ivela emsebenzini ukhathele, shayela ibhodlela lakhe elimnandi futhi eliphumuzayo, ukhanyisa amakhandlela, vula umculo wakhe ozithandayo. Thokozani othandekayo wakho nge-ayisikhilimu ayithandayo noma okumnandi okumnandi. Uma uthenga isipho esincane, uzokwazi ukuhlakulela kokubili, futhi ungaphutha ngokukhetha isipho, udinga ukubuza kusengaphambili futhi uziqondise ngokwakho ekuthandeni, lungisa ummangali wakho isimanga.
4. Akekho obhekene namaphutha, noma umlingani wakho, noma wena. Funda ukuthethelela, banikeze ithuba lokulungisa, ungakhohlwa ukuthi ezimweni eziningi ezingqubuzaneni, njengomthetho, bobabili bayecala.
Kuyadingeka, ngangokunokwenzeka ukuthi isikhathi sokukhululeka sichitha omunye nomunye. Zingaki imibhangqwana eshadile emva kweminyaka eminingana yokuhlala ndawonye ingahweba ngalobusuku ngebhola nebhaya, noma nabangane nabangane kusihlwa nehafu yabo? Mhlawumbe akuningi, nakuba izazi zengqondo zithi ngisho nabangane babalulekile, kodwa endaweni yokuqala kufanele kube ngumuntu oseduze nomndeni. Ngezinye izikhathi ungakwazi ukuzidela ngobusuku nabangane bese uhamba ebusuku. Phela, ngalokhu awugcini nje ngokunikela, kodwa futhi unikeze othandekayo wakho ukuthi aqonde ukuthi empilweni yakho into ebaluleke kunazo zonke.
Bhala omunye nomunye imiyalezo yothando, mhlawumbe lesi seluleko, futhi ukhathele, futhi unikezwa wonke omagazini omusha omangalisa, kodwa usebenza. Amanothi amancane, ukuvuma, ukuncoma kanye nezicelo ezinhle, ngoba kunothando kangaka. Amadoda akholelwa ukuthola incwadi yothando noma incwadi, kuhle kakhulu, ungakholelwa. Qiniseka ukuthi uyayisayina ngokufanele, esikhundleni segama, ngamazwi anjalo "Ngiyaphuthelwa ngempela uthando lwami, ngilangazelela ukukubona," ngena igama lakho ngothando ...!
Kuye kwaphawula ukuthi lezi mbhangqwana ezivame ukuvela ndawonye zinobuhlobo obuqinile emndenini. Gubha amaholide, zama ukuphuma ndawonye ukuvakasha imishado yezihlobo ezikude, konke lokhu kuzokuvumela ukuthi ukhumbule uthando lwakho. Kubonakala ndawonye endaweni yomphakathi, ungasho ngokuqiniseka ukuthi ungumbhangqwana. Kubaluleke kakhulu ukuthi owesifazane azizwe ekhoneni.
Wonke umuntu udinga uthando kungakhathaliseki ubudala nobulili. Akekho ofuna ukuchitha izimpilo zabo yedwa, bonke abantu bafuna ukushisa, wonke umuntu ufuna ukunakekelwa. Ukukhathazeka okukhulu ukunakekelwa komuntu othandekayo. Izinkinga zasemakhaya azibhubhisi ukuphila komndeni, udinga ukucabanga ukuthi unjani ubuhlobo obunalo nomuntu othandekayo ngesikhathi esinikeziwe, khona-ke ngeke ukwazi ukuthola ukuthi izinyembezi zokulahlekelwa ziphi.
Ekuphetheni, singasho ukuthi ubudlelwane buzobe buphakeme, uma uzonakekela njalo. Kuzosiza ekunikezeni impilo entsha yothando noma into evame kakhulu, into ebaluleke kakhulu ukuthi ibonisa ukunakwa, inhlonipho nothando lwakho. Sithemba ukuthi isihloko sethu sizokusiza futhi sikutshele indlela yokugcina ubuhlobo obufudumele nomyeni wakho.
Ukuziphatha okuholela ekuphuleni ebuhlotsheni
Ukubonisana ngesihloko - kungakhathaliseki ukuthi kukhona uthando
Iwayini elivinjiwe elivinjiwe elivinjiwe
I-Meteozavisimost - ukuncika esimweni sezulu
I-pudding kabili ye-chocolate
I-pasta enenkukhu kanye ne-broccoli
Okufanele ukwenze ukuze ugcine umbono ngesikhathi sokukhulelwa
Amakhambi omphakathi okwehla kwesisindo: amakhambi okushiswa kwesisindo